राजकुमारीलाई घरबाट निकाल्न मन्त्री पोखरेलको कडा आदेश ! « Nepali Digital Newspaper
राजकुमारीलाई घरबाट निकाल्न मन्त्री पोखरेलको कडा आदेश !
२१ आश्विन २०७७, बुधबार १८:२९
तर पछि पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र पछि माओवादीनिकट बनेका दुर्गा सुवेदीकी पत्नीसमेत रहेकी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेलगत्तै उनले न्यायालयको पूर्वनिर्णय उल्टाएर प्रेरणाको घरजग्गा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा जाने निर्णय सुनाइदिएकी थिइन् । प्रेरणाको दाइजो सम्बन्धमा गरिएको यो निर्णयले उच्च पदमा कुनै महिला पुग्दा महिलामाथि अन्याय हुँदैन भन्ने धारणालाई निराधार सावित गरेको थियो । कार्कीको आदेशमाथि पूनरावलोकनका निम्ति दिइएको निवेदनमाथि पनि सुनुवाइ नभएपछि प्रेरणा घर छोड्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य हुनुभएको हो । घर निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै छोड्ने प्रतिबद्धता जाहेर हुँदा पनि ईश्वर पोखरेलले राजकुमारीप्रति असहिष्णु व्यवहार दर्शाउँदै किन वैरभाव देखाउनुपरेको हो, आश्चर्यजनक मानिएको छ ।